China Led Corn Bulb Lamp China Manufacturers & Suppliers & Factory
Led Corn Bulb Lamp - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Led Corn Bulb Lamp)
250W E27 E39 Led Corn Bulb Lamp
Ịmepụta ihe ọkụpụta 28800 Lumens na 240 Watts, 250W Led Corn Lamp bụ ike na-arụ ọrụ nke oma ọzọ na ihe ọkụ na-eme ka ọ dị elu. Ndị a dị elu na-emepụta Led Corn Bulb Lamp dị na ọtụtụ nhọrọ isi, dika E26 E27 E39 na E40 isi. Okpukpo ukwu Led Corn Lamp E27 Ezubere iji belata ike a na-ere na ihe eji eme ihe eji eme ihe na...
120W Led Corn Bulb Lamp 3 afọ ikike
N'elu ihe karịrị 130 Lumens per watt, Ọkụ 120w nke a bụ ezigbo ngbanwe maka 300-Watt ruo 400-Watt MH ma ọ bụ HPS ọ bụla na-adọba ụgbọala na-adọkpụ akpụkpọ ụkwụ ụdị ihe ọkụkụ. Nke a Led Corn Bulb 120W na- eji isi ala na-agagharị iji mee ka nkwụsị na nhazi. Nke a bụ 120 Watt Led Corn Bulb na -emeghe ma jigharịa...
Ọdịdị dị mma na ike ịzọpụta: Nke a Led Corn 30W bụ 9000Lm maka mgbanwe 100b nke ọkụ na-emepụta bọtịnụ. Ọdụm Ọkụ 30W Led dị nnọọ ike ma chekwaa ụgwọ ọkụ eletrik gị. Imirikiti ìhè: Ọdụm 30W Ọkụ adịghịzi na-echere ụdị ikuku ụdị anụ ọhịa ochie na-ekpo ọkụ, ọ dịghịkwa ihe ọ bụla a na-ahụ anya. Ogologo oge ebighi ebi:...
Led Corn Bulb Lamp Led Corn Bulb Led Corn Bulbs Led Corn Bulbs Uk Led Corn Bulb Amazon Led Corn Bulbs 80W Led Corn Bulb Menards Led Corn Bulbs 120W